रुपा सुनारले आफ्नो मोबाइल अनु,सन्धानमा नदिनु को कारण के हो ? खुल्यो सब ग,म्भिर रहस्य,भिडियो हेरौ – Classic Khabar
July 8, 2021 181
सर्वोच्च अदालतले जा,तीय विभे,दको आरोप लागेकी घरबेटीलाई रि,हा गराउन सहयोग गरेको विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले मन्त्री श्रेष्ठलाई ब,र्खास्त गर्न माग गरेको अन्तरिम आदेशका विषयमा भने छलफलका लागि दुबै पक्षलाई असार २८ गते बोलाएको छ ।
सञ्चारकर्मी रुपा सुनारलाई जा,तीय वि,भेद गरी कोठा भाडामा नदिएको आ,रोप लागेकी सरस्वती प्रधानलाई रि,हा गराउन मन्त्री श्रेष्ठ आफैं प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए । यस विषयमा मन्त्री श्रेष्ठवि,रुद्ध प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयमा उजु,री दिँदा लिन नमानेपछि रुपाले सर्वोच्चमा रि,ट दायर गरेकी थिइन् । यो मु,द्दामा सर्वोच्च अदालतले मन्त्री श्रेष्ठसहितका विप,क्षीसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ ।
त्यस्तै यो मु,द्दालाई शीघ्र टुं,गो लगाउनुपर्ने भन्दै अग्रा,धिकार दिन अदेश दिएको छ । रुपा सुनार र घरबेटी सरस्वती प्रधान प्रकरण दिनदिनै नया मोडमा पुगेको छ र धेरै व्यक्तीहरुले आफ्नो आवाज दिएका छन । यसै बिचमा कलाकार सबिता भण्डारीले आफ्नो बिचार राखेकी छिन हेरौ के भनिन उनले भिडियोमा
Prevसाबधान रहनुहोस्! यी नौ जिल्लामा छन् बढी सङ्क्रमित
Nextआधा घण्टामा आउँछु भनेर घरबाटै ब्वाइफ्रेण्डसँग हिँडेकी २१ वर्षीय बिना आखिर कहाँ बेपत्ता भइन् ? प्रेमी भन्छन्: पैसा झिकेर बाहिर आउँदा उनी थिईनन्